Koorsada mashruuca ee AutoCAD Civil 3D 2011 - Geofumadas
Janaayo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, topografia
Wixii mashaariic injineernimo ah, oo ku lug leh horumarinta guryaha, jidadka, muuqaalka guud iyo shabakadaha tuubbada AutoCAD Civil 3D 2011 waxay cadeyneysaa inay tahay qalab qiimo leh. Ka dib isbeddelka ku dhacay barnaamijkan, qaybta 2011 waxaa lagu arki karaa bisayl badan oo dadka isticmaala si ay ula qabsadaan isdhexgalka cusub ka dib wax yar encotronazos waxaan aragnaa faa'iidooyin badan.
AptCAD, shirkadda taas oo horumarisay in Buug gacmeedka 3D waxaan idiin sheegay horaantii aad jadwal waqti Dabcan degdeg ah 9 6 AM: PM 30 (9 18,30 in) 22 iyo maalmaha 23 2011 March.
Koorsadu waxay ka dhici doontaa magaalada Valencia, waxaana jira xad u diiwaan gashan illaa iyo 15-ka Maarso. Maaddaama boosku kooban yahay, waa inaad deg degtaa.
Qiimaha: Hoose ilaa sare 295 Euros, oo leh ikhtiyaarka lagu kabayo lacagta Hay'ada Saddex-Biloodle ee Tababarka Shaqada.
Waxay ila tahay aniga fursad qaali ah, waxaan horeyba u jeclaan lahayn koorsooyin degdeg ah sida tan oo kale oo la raaco iyo magaalooyinka kale. Waxay noqoneysaa caajis koorso soconaya dhamaadka usbuuca ama dhowr habeen bartamaha taraafikada iyo daal shaqada kadib. Tan waxaa lagu sameeyaa 16 saacadood gudahood laba maalmood oo isku xigta.
AutoCAD Interface MNNUMXD.
Soo-dejinta iyo maareynta faylasha faylka.
Jiilka MDT. Falanqaynta heerarka sarreeya, xajmiga iyo boogaha.
Qaybaha: Ciriiri iyo faransiis.
Shaqooyinka qarsoodiga ah: Isku-dhafka, qaybta qaybta iyo xargaha.
Dhaqdhaqaaqa dhulka iyo xisaabinta mugga.
Foomka hore loo geliyay Halkan.
Faahfaahinta koorsada Halkan.
Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad la xiriiri kartaa Vicente Alarcón
taleefannada 96.313.40.35 - 629.670.173
ama u dir vicente.alarcon (at) applyd.com
Post Previous" Hore CUTUBKA 2: FURASHADA HA'YADA 6565
Post Next La xiriir / Ka qaybgal: Adeegyada degmooyinkaNext »
2 Jawaabta "Koorsada mashaariicda ee AutoCAD Civil 3D 2011"
3D DIYAARINTA XIDHIIDHA 2012 VIDEOS HORUMARINTA
www (Point) peruviantec (dhibic)
MAS'UULIYADDA SOOMAALI 3D 2011 IN 144 VIDEOS XIRIIRADA KA QAADASHADA ARRIMAHA BUUGGA: